Archive du 20191121
Famonoana 3 mianaka 1 migadra mandra-pahafaty, afaka ny ambiny
Olona iray migadra mandra-pahafaty. Afaka noho ny fisalasalana kosa ireo ambiny voarohirohy tamin’ny vono olona
Fandraisana miaramila Misy misoloky ihany koa
Mandeha ny hafatra sy ny fampilazana fiantsoana samy hafa fa misy ny fandraisana ireo zatovolahy nahavita fanompoam-pirenena horaisina miaramila raikitra any anaty tambajotran-tserasera any.
Mihazakazaka ny fikaroham-bola amin’ny fomba rehetra avy ato anatiny, rehefa marisarisa ny avy any ivelany.
Fiara mibahan-dàlana eto Iarivo Mila miala ao anatin’ny 8 andro
Namoaka fampahatsiahivina ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), fa rarana ny fametrahana sy famelana karazana entana, toy ny fiara na fiara maty eny amoron’arabe sy eny amin’ny toerana voarara.
Fandraharahana lavanila ao SAVA “Mampijaly mpamboly ny Mafia.”
Tohin’ny asa efa napetraka sy fanarahana ny fiainam-pirenena eto Madagasikara no antony handatsahana kandida maro miisa 28 ao SAVA, hoy ny filohan’ny antoko Natiora, Mihari-Ni-Rencho.
Maroantsetra Nopotehin’andian’olona ny JIRAMA
Nisy andian’olona nirohotra namotika ny atin’ny tobim-paritry ny JIRAMA ao Maroantsetra, afak’omaly hariva, tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany.
Sehatra nomerika Tsy takatry ny maro ny sarany
Mila ahena na soloina mihitsy ny hetra alaina amin’ny lafiny nomerika hoy ireo mpisehatra amin’izany
Tavoahangy plastika Tena manimba tontolo iainana, 900 taona vao levona
100 ka hatramin’ny 900 taona vao levona ny tavoahangy plastika iray raha haparitaka fotsiny eny rehetra eny.
Fakana fasika eny Ikopa Ahiana hamotika fotodrafitrasa maro
Lakana enina na fito isan’andro no maka fasika ao ambany tetezan’Ampasika, lalovan’ny ranon’Ikopa amin’izao no hitan’ireo tompon’andraikitra eny an-toerana manao izany asa izany tsy mitsahatra.
Iavoloha Fatin-dehilahy mifono mistery…
Lehilahy iray no hita faty anaty tatatra fandehanan’ny rano maloto teny Iavoloha, teo amin’ny sampanana mihazo ny Lapam-panjakana omaly vao maraina.
ANOSY Zazavavy kely 4 taona nazeran'ny taksibe
Ankizy vavy kely sahabo ho efatra taona no nianjera tampoka teny ambony taksibe teo Anosy omaly maraina tamin'ny 6ora sy sasany. Sady niteny ilay mpamily hoe :